I-China Balcony Glazing System Kinzon06 ifektri nabaphakeli | Kinzon
Uhlelo lwe-Kinzon06 glazing system lugcina imvula, iqhwa, umoya, uthuli nezinyoni kude ne-balcony yakho ngaphandle kokunciphisa inani lokukhanya okutholayo. Ukuvikelwa kohlelo lwe-balcony lwe-balcony uhlelo lwe-balcony lisho isikhathi esincane nemali esetshenziselwa ukulungiswa nokulungiswa kwangaphakathi nezakhiwo ze-balcony. Izifundo eziningi ku-Kinzon06 uhlelo lwe-balcony glazing lubonisa ukuthi ukudala i-solarium kunciphisa ukusetshenziswa kwakho kwamandla ngokulinganayo. Uhlelo lwe-Kinzon06 glazing system lokunciphisa amazinga womsindo lukufika kuma-50%, ukuze uphumule ngaphakathi kwekhaya lakho futhi ulale kamnandi.
Uhlelo lwe-Balcony glazing-Kinzon06
Ungake ube nesikhala esiningi kakhulu? Uhlelo lwe-Kinzon06 glazing system lunikeza wena nomndeni wakho igumbi elengeziwe ongalisebenzisa nganoma yini oyithandayo. Kepha hhayi lokho kuphela, uhlelo lwe-Kinzon06 balcony glazing system lungasebenza izimangaliso zazo zonke izinhlobo zezakhiwo. Uhlelo lwe-Kinzon06 glazing system lube yi-investimenti esisiza ukuthuthukisa umlingiswa wesakhiwo, ngenkathi yenza indawo yokuhlala iphephe kakhulu futhi ihehe.
I-F70300 ye-Kinzon06 uhlelo lwe-balcony glazing is a roll rolling, isebenzisa umjikelezo wasentwasahlobo wokunyakaza ungalawula igebe phakathi kwewilazi; ukusetshenziswa kwe-F70400 kuyinto ye-eccentric, isebenzisa ubuhlakani obusezingeni eliphezulu ukulungisa ukuhanjiswa kwangaphambi nangemva kwephakathi kwengilazi yeglasi.
Uhlelo lwezomnotho uhlelo lwe-balcony glazing-Kinzon olusetshenziselwa zonke izinhlobo ze-balcony shape
Intengo yompheki Intengo iphansi, kepha ikhwalithi ilungile.
Ama-roller we-POM uhlelo lwe-balcony glazing-Kinzon isebenzisa isondo le-POM kanye nokuqina kweslayidi
Izimbazo ezinamaHinge Sebenzisa i-SS304 kuma-axle we-hinge ukuze ikwazi ukuma ngesisindo esikhulu, gwema amaphaneli engilazi awela phansi.
Amapaneli wengilazi Ububanzi obukhulu bephaneli yengilazi bungu-700mm kanti ukuphakama kungama-2200mm.
Ukulungiswa okulula: Usebenzisa i-eccentric ehlelekile ukulungisa ukusatshalaliswa kwangaphambi nangemva kwephakathi kwengilazi yengilazi
I-Rivet insides engabonakali Faka isicelo sephrofayili yengilazi ngokukhethekile nama-rivets angaphakathi angabonakali
Izingxenyekazi zekhompiyutha zokuxhumana Sebenzisa i-SS304 ukuxhuma amaphrofayli wethrekhi ukuqinisekisa ukuqina kokuxhuma
Izinto zephrofayili Izinto ezisetshenzisiwe ze-Aluminium alloy 6063T5 zamaphrofayili, okuphezulu kuphathwa nge-tuli ye-electroplating e-tuli
Esedlule: I-Balcony Window Kinzon50
Olandelayo: I-Glass Folding Door Kinzon35
Iwindows engenazithombe Kinzon09
Iwindows Glass Kinzon50
Iwindows Design Kinzon09
Ifasitela Lokugoqa Esishelelayo Kinzon50